Island oo codsatay iney ku biirto EU-da - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
slands ansökan om EU-medlemskap
Island oo codsatay iney ku biirto EU-da
La daabacay måndag 20 juli 2009 kl 15.01
Islands ansökan om EU-medlemskap Foto Bertil Ericson / SCANPIX
Dowlada Island oo horey u codsatay iney xubin ka noqto midowga Yurub ayaa meelo kala duwan laga soo dhaweyey. Rai’sal wasaaraha dalkan Iswidhan Fredrik Reinfeldt iyo gudoomiyaha komishinka Yurub Josè Manuel Barosso ayaa si diiran u soo dhaweeyey arrintaasi.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasada Yurubna waxaa ay runsan yihiin in Island haatan ay heyso wadadii ay kaga mid noqon laheyd Midowga Yurub, taasoo ah bey yiraahdeen mid ka degdegsiimo badan codsiyadii ay horey u soo gudbiyeen dalalka Turkiga, Karoeeshiya, Abaaniya iyo Mikdooniya oo sugaya iney in codsigooda la aqbalo.
Island haatan waxey si buux dhaaf ah u sameysay qoddobada aasaaska u ah sharuudaha Midowgu doonayeen ah ee xubin looga noqon karro” sidaasina waxaa yiri weriyaha Radio Sweden qeybteeda wararka baahisa ee Ekot uga soo warama magaalada Bryssel Stefan Wininger.
Isagoo weli ka hadlaya arrimaha codsiga Island ayuu sheegay iney dhici karto in si qaas ah loo eeggi doono, marka loo eeggo dalalkaasi kale. Tusaale ahaan dalka Turkiga oo sharuudaha horyaala ay kamid tahay xorriyada cabirka hadalka, qadiya Quburus oo ay iyadana xannibeyso Gariiga, halka arrimahaasi oo dhan aanu hor uulin dalkan Island.
”Waxaa jiri kara su’aalo kale oo garaangirt usha ku wareejin karto oo dhowraneysa xukuumada dalkaasi. Tusaale ahaan nafaqeynta kalluunka oo ah arrin aad muhiim u ah, iyo markii ay saameynta weyni oo xagga qalalaasaha bankiyada dalkaasi ku dhacay, markaasoo ay noqotay mid muhiim ah oo noqtay warshadeynta nafaqeynta kalluunka. Taasina waa mid isku duweysa siyaasada Yurub ee kalluumeysiga ah.
Taasina waa mid diidmo mucaaridnimo ah oo dhinaca Island dhowraya, ama ka dhan ah danaheeda. Waxaa kaloo jirta arrin qasab ku noqon karta Island oo ah in ciidamada kaluumeysata Yurub ay galaan biyaha kalluunka leh, taasoo iyadana aan la hubin in Island u aragto arrin wanagasan. Taasina waa mid sabab ka dhigeysa in Island ay dibada ka joogto.
Qalalaasaha dhaqaale ee dhaqaalaha dalkaasi iyo bankiyada ku dhacay ayaa waxey tahay arrin si gaar ah u wel wel gelineysa dalalka Ingiriiska iyo Holland, taasoo iyana dhici karta in dalalkaasi ku qasbaan in xukuumada dalkaasi ay marka hore u celiso shaqsiyaada u dhashay dalalkaasi ee iyagana lacagaha u yaalay bankiyada Island markii uu qalalaasaha ku dhacay, tanina waa mid rajo laga qabo in dhinacyada Holland iyo Ingiriiska ay yiraahdaan HAA codsiga Island ee kamid ahaanda Midowga Yurub.
” Tani waa mid ka baarandigid haddii ay jiraan dalal xubno ka ah bahwadaagta oo sharuudo ku xirraya wadanka kamid ahaanayo, taasina waa boos adag. Mida kale ee wel welka ku ah dalka Ingiriiska ayaa in sharuud laga dhigo in Island ay soo celiso lacagaha lugu leeyahay. Misna waxaa jira dhinaca kale oo iyadana laga yaabo iney quseyso qadaadicda, taasoo ah mid Island dhaqaalaheeda xoojin kara iyo iyadoo cagaheeda isku taagto markale, taasina waa mid rajo laga qabo.
Ra’iisal wasaaraha dalkaasi Johanna Sigurdardöttir ayaa waxey ku xisaabtameysa in codsiga dowladeeda ee kamid ahaanshaha Midowga Yurub uu ahaan doono mid horyaala marka ay wasiirada arrimaha dibada dalkaasi ay shir ku yeelanayaan magaalada Bryssel oo xarun u ah wadankaasi Biljim toddobaadka soo socda. In Bahwadaagtu ay aqbasho xubinimada Islandna waa mid ku xiran cod doorasho loo qaado.